Ratsimandrava : ilay nampifandray ny Soatoavina Malagasy sy ny politika – Blaogin'i Voniary
Ny Soatoavina Malagasy : tsy hevitra manidina, tsy zava-tsy hay takarina ! Ny Soatoavina Malagasy : tsy hoe ianarana any an-tsekoly fotsiny, tsy hoe tononina fotsiny rehefa manatanteraka fomba Malagasy toy ny famangiana manjo, fanateram-bodiondry, famadihana sy ny sisa. Fa ny Soatoavina Malagasy : natao iainana andavanandro sy ampiharina eo amin’ny izay sehatra ikatrohanao.
Ny kolonely Ratsimandrava, izay mpandala fatratra ny maha-Malagasy dia niezaka nitondra izany teo amin’ny sehatra politika. Niavaka tokoa izy, noho izany, na tamin’ny fitondran-tenany, na tamin’ny kabary nataony na tamin’ny fomba fintantanan-draharaha satria « sahy nitondra rivo-baovao feno hanitry ny maha-Malagasy » hoy Rakotohova Clet Edouard tao anatin’ny fanolorana ny bokiny. Ndeha ary hofakafakaintsika ireo Soatoavina Malagasy sy ireo fahendrena niainany.
Mijoro amin’ny maha-Malagasy
Notandrovan’ny Kolonely Ratsimandrava hatrany ny maha-Malagasy teo amin’izay rehetra nataony na fony izy mbola minisitry ny atitany na fony izy filoham-pirenena. Ny « fanahy maha-olona » sy ny Soatoavina Malagasy no fenitra nitondrany ny Tany sy ny Fanjakana. Hoy indrindra izy:
Aoka ny zavatra izay efa tao amin’ny fomba Malagasy no raisina hatao fiasana amin’ny fampivoarana ny Malagasy.
Tsy maintsy araka ny toetran’ny tany, araka ny zava-misy eto amintsika no hakana izay rafitra hajoro, fa tsy tonga dia haka môdely any ivelany any.
cc : Ratsimandrava Richard (Facebook)
Manome hasina ny Fokonolona
Ny Fokonolona dia rafitra ara-voajanahary efa nisy teo amin’ny fiarahamonina Malagasy hatrizay. Tsy misy fivanavakavahana ao anatiny ary endrika isehoan’ny fihavanana sy ny firaisankina izy. Izay no nahatonga ny Kolonely Ratsimandrava nandray azy ho fototry ny fanorenana sy ny fanarenana. Hoy ny Filoha Ratsimandrava raha tany Besalampy izy :
Tsy afaka hijoro amin’ny fizaràn’antoko izy, amin’ny fizaràna ara-pinoana, amin fizaràna ara-pirazanana, fa ny hampiray antsika Malagasy no hanaovana izao fokonolona izao ; ka ianareo no ho tompon’andraikitra amin’izany.
cc: Ratsimandrava Richard (Facebook)
Mikatsaka ny soa iombonana
Ny rafitra ara-toekarany niriny najoro dia mitsinjo ny tombontsoan’ny Malagasy rehetra. Izany hoe ny famokarana, ny fivarotana ary ny fananganana orinasa dia natao ho an’ny Malagasy aloha. Tamin’ny fanjanahan-tany manko dia ny mpanjanaka no mamaritra izay voly hovokarina ary ny foto-drafitrasam-pitaterana natsangany dia mba ahafahana mitatitra ireo vokatra avy any am-potony ka hatrany amin’ny seranan-tsambon’ny Toamasina, avy eo aondrana any Frantsa. Izany rafitra izany no nikirizan-dRatsimandrava narodana sy novaina. Tamin’ny diany tany Fenoarivo Atsinana no nilaza izao ny Filoha Ratsimandrava :
Isika no hihevitra ny fomba hamokarana ny hohanintsika, hamokarana ny zavatra ilaintsika, hamokarana izay zavatra hahitantsika tombontsoa ho antsika Malagasy, fa tsy ho an’ny hafa. Taloha no nitatatra ho an-dRainilaizafy, fa vita teo ny amin’izany tompokolahy sy tompokovavy.
Manome lanja ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifampidinihana
Tamin’ny toeran rehetra izay nandalovana dia tsy mba « kabary tsy valiana » tahaka ny an’ny manam-pahefana rehetra ny azy fa mamela malalaka ny mpanatrika hametraka fanontaniana hatrany izy ao arian’ny lahateniny. Ny fifanakalozan-kevitra manko dia endrika fanehoana fifanajana sy fifanomezan-kasina ao anatin’ny fiarahamonina. Hoy koa izy:
Ity fomba hoe tonga dia mandatsa-bato ity ohatra dia fomba azontsika tamin’ny vahiny. Mba ifanarahan’ny besinimaro dia mila fifampidinihina aloha.
Mandala ny fahafahana, ny fahalalahana ary ny fahaleovantena
Satriny mba hahatsapa sy hiaina io fahafahana io ny Malagasy tsirairay. Sarobidy taminy ihany koa ny fiandrianam-pirenena izay endrika faratampony isehoan’ny fahafahana sy ny fahaleovantena eo amin’ny firenena. Nanana ny foto-keviny izy ary sahy nijoro tamin’izany ka tsy mba voarebirebin’ny mena miraviravy sy ny tsindry maro samihafa na avy eto an-toerana na avy any ivelany. Hoy ny kolonely :
Aza amidy ny fahafahana fa mampiditra amin’ny fanandevozana.
Ny volamena latsaka am-bovoka, anefa, tsy avelan’ny soa tsy hihiratra ! Olomanga tsara alaina tahaka ilay « Minisitrin’ny ala olana » sy ilay « Filohan’ny Fokonolona ». Andao ary ezahina fantarina sy omena ny toerana mendrika azy izy, mba ho zary « zezika ho an’i Madagasikara » tokoa anie ny rà nalatsany, araka ilay tononkalon’ny tanora iray tamin’ny 1975.
Loharano: Boky - Ny fokonolona araka ireo kabary nataon'ny kôlônely Richard Ratsimandrava eran'ny nosy 1973 - 1975
Filoham-pirenena, Fokonolona, Mahery fo, olomanga, Ratsimandrava Richard, soatoavina malagasy